Ebe a na -agafe agafe na -amalite ọmarịcha ebe dị na njedebe Transbay nwa oge
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ebe a na -agafe agafe na -amalite ọmarịcha ebe dị na njedebe Transbay nwa oge
Na-agbasa News Travel • omenala • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Nhazi nke nri na ihe ọ outdoorụ outdoorụ n'èzí, ihe ntụrụndụ, na ihe ntụrụndụ ga -eme ka obodo San Francisco dị ọhụrụ ma nyekwa ndozi dị mkpa na mpaghara East Cut na mmeghe nke Crossing na East Cut.
Ịgafe bụ nkwalite nwa oge etolitere na nzaghachi na nhazi nke Mayor London Breed's Downtown Recovery Plan.
Mgbalị ọtụtụ afọ iji mee ka saịtị ahụ rụọ ọrụ ga-eweta uru dị mkpa maka agbata obi ebe ọ na-enyekwa aka ịmalitegharị obodo San Francisco.
A na-agbanwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hekta 3.5 ka ọ bụrụ oke osimiri.
Ndị mmekọ East Cut Landing (ECLP), mmekorita n'etiti Mpaghara Uru Obodo nke East Cut Community (East Cut CBD), Ogige Nestory, Ezigbo Ọrụ na Soccer Street USA, ekwuputala mmeghe nke gọọmentị Ịgafe na East Cut, ebe obodo na -aga na ọdụ ụgbọ mmiri Transbay Trans Nwa Oge. Mgbalị ọtụtụ afọ iji mee ka saịtị ahụ rụọ ọrụ ga-eweta uru dị mkpa maka ndị agbata obi ebe ọ na-enyekwa aka ịmalitegharị obodo San Francisco na ịkwado obere azụmaahịa chere nsogbu ndị a na-enwetụbeghị mbụ n'oge ọrịa COVID-19.
Na -emepe na Septemba 10, 2021, Crossing bụ nkwalite nwa oge etolitere na nzaghachi na nhazi nke Mayor London Breed's Downtown Recovery Plan. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3.5 acre n'etiti Howard, Main, Folsom, na Beale Street ka a na-agbanwe ka ọ bụrụ ọmarịcha obodo mepere emepe nke na-egosipụta ogige biya biya ezinụlọ, gwongworo nri, ubi bọọlụ na ihe mgbochi ala na mbido mbụ. A ga -atụkwasị ihe nkiri sinima n'èzí, ebe nri na ebe a na -ere ahịa, ebe ahịa obodo, na ebe egwuregwu n'oge adịghị anya.
Maazị Breed kwuru, "Afọ a egosila anyị etu ohere oghere dị maka ọdịmma obodo anyị na mmepe obodo anyị niile." "Ebe a mara mma nke ọma ga -enye ma ndị otu obodo ma ndị ọbịa nke obodo anyị ohere nchekwa ma na -adọrọ mmasị ịpụ n'èzí wee nwee ọmarịcha okirikiri obodo anyị."
Kipp Kjeldgaard nke Real Active kwuru, "Ndị bi ebe ahụ na-akwali ọtụtụ afọ ime ka saịtị ahụ rụọ ọrụ, yabụ anyị chere na anyị kwesịrị imepe ngwa ngwa o kwere mee ma gbakwunye mmemme n'ime ọnwa ndị sochirinụ." “N'iburu mmetụta COVID-19 nwere na azụmaahịa, imepe ngwa ngwa dịkwa mkpa iji nyere ndị ọchụnta ego mpaghara aka ma nye aka n'ịkpọghachite ndị ọrụ na ndị ọbịa na Obodo San Francisco. "
“Site na mmekorita ya na ndị ọchụnta ego mpaghara na ndị otu obodo iji nye mmemme dị iche iche ma na -etinye aka, ọrụ ọhụrụ a na -atọ ụtọ ga -aga n'ihu na mgbake obodo San Francisco ma bụrụ n'ezie ebe mmadụ niile ga -enwe nnabata. Anyị na-akpọ onye ọ bụla ka ọ sonyere anyị na mmemme niile na-eme San Francisco ka ọ bụrụ obodo ama ama n'ụwa; nnukwu nri, egwu, mmemme na ebe mmadụ niile ga -ezukọ na ọnọdụ pụrụ iche n'ezie. ”
Nzaghachi sitere na nzaghachi obodo
East Cut CBD, ụlọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ na -enye nhicha, nchekwa, na ndozi ogige na oghere mepere emepe na mpaghara, arụ ọrụla ime ka saịtị ahụ rụọ ọrụ ihe karịrị afọ atọ. Dịka akụkụ nke usoro ahụ, emere nyocha nke ihe karịrị ndị agbata obi 1,200 na mmekorita ya na onye nlekọta District 6 Matt Haney, na-ajụ ndị zara ajụjụ gbasara mmasị ha maka mmemme saịtị.
"Nzaghachi ahụ nyere aka n'ịduzi mmepe mmekọrịta anyị na saịtị ahụ, ndị ọbịa mmemme ga -ahụ na -egosipụta nzaghachi ndị a," Andrew Robinson kwuru, onye isi oche nke East Cut CBD kwuru.
Onye nleba anya Haney kwuru, "Nke a bụ agbataobi na -eto eto ma na -eme nke ọma, mana ọ ga -achọkwu oghere obodo ka ha zukọta, gwuo egwu ma nwee ọ enjoyụ." “E mere Crossing iji gboo mkpa a yana mmekorita ya na ndị bi. N'inwe ọtụtụ akụkụ na ihe na -atọ ụtọ, ọ ga -agbakwụnye ọbụna mmụba karịa n'otu n'ime obodo anyị na -eto ngwa ngwa. "
N'ime saịtị ahụ, a ga-enwe ogige biya biya enyi na ụlọ nke Monarch Beverage Catering na-arụ, nke na-agba ma ebe a na-ete brik na ngwa agha na ihe omume na-apụta n'èzí ihe karịrị afọ 10 n'obodo. Na -ebuga ahụmịhe sitere na gburugburu gburugburu, gụnyere mpaghara ezinụlọ, ebe ezumike, na ebe enwere ike idobe maka otu na otu, ogige biya ga -enwe tebụl picnic, oche ezumike n'èzí, na ihe mgbochi ala nke onye omenkà obodo Laura Stevenson mere.
Ọ bụ ezie na a ga-emechi ogige biya site na nri na kiosks azụmaahịa nke onye ọchụnta ego obodo na onye nwe ụlọ Lightbox Café, Hugo Santana, usoro dị iche iche nke gwongworo nri ga-anọ n'ọnọdụ ha ruo mgbe nrụpụta na nrụnye ga-agwụ.
Dabere na mpaghara, Soccer Street USA bụ onye mmekọ ogologo oge nke Obodo San Francisco na onye isi mba na -eji bọọlụ maka mgbanwe mmekọrịta, yana ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe na -arụ ọrụ na San Francisco na gafee mpaghara Bay, California na mba ahụ. Street Soccer USA ga-etinye ụlọ ikpe egwuregwu bọọlụ abụọ iji kwado egwuregwu asọmpi asọmpi maka mmadụ niile na mgbakwunye na ịnabata mmemme na mmegharị egwuregwu ndị ọzọ. Street Soccer USA ga -azụkwa ma goro ndị otu obodo ọzụzụ na ijikwa mmemme maka Street Soccer Community Club ebe ndị ntorobịa agbata obi nwere ike nweta usoro mmụta nke ndụ site na bọọlụ n'efu.
"Site n'ịbanye n'ike egwuregwu ahụ, nke na -akpọkọta ndị egwuregwu n'agbanyeghị agbụrụ, okpukperechi ma ọ bụ ọnọdụ akụ na ụba, ogige ntụrụndụ Soccer USA na -aghọ isi nganga obodo. Ewubere oghere anyị n'otu mmụọ a, obi dịkwa anyị ụtọ ịkpọ onye ọ bụla ka ọ kpọọ ebe a ma sonye n'ike bọọlụ ka ọ dịrị n'otu, "Onye isi nchịkwa Street Soccer USA, Rob Cann kwuru.
Ndị otu na -agafe agafe na -atụkwa anya na sinima dị n'èzí ga -adị njikere ịnabata ndị na -ekiri ihe nkiri na ihe ngosi curated obere oge ka emepechara saịtị ahụ. Onye na -akwalite mmemme na egwu Noise Pop Industries, nke na -arụ ọrụ mpaghara Bay DoTheBay.com ma nyere aka weta abalị abalị ihe nkiri ihe nkiri Fort Mason Flix na Sundown Cinema ndụ, etinyela aka n'ịzụlite ma rụọ sinima dị n'èzí.
Na mgbakwunye na mpaghara ahụike obodo raara nye nke mepere emepe maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị nkuzi, LuxeFit, nke na -arụ ọrụ ugbu a na Proxy na Hayes Valley.
Mpaghara Crossing's Community ga -egosipụta ọtụtụ ihe eji enyere ọha aka, gụnyere ihe dị ka square mita 5,000 nke ime ụlọ nke ndị otu obodo nwere ike idobe ya na akwụghị ụgwọ. Njikwa na -emepekwa ahịa ahịa obodo, nke na mgbakwunye na ịre ngwaahịa ọhụrụ, ngwaahịa mpaghara mmadụ nwere ike ịhụ n'ahịa onye ọrụ ugbo, ga -egosipụtakwa ngwugwu ngwongwo na onyinye mkpọsa.
N'ihi ntinye sitere na San Francisco Office of Community Investment and Infrastructure (OCII), Crossing na -arụ ọrụ En2Arụ ọrụ na La Cocina, òtù ndị na-anaghị akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ iji dozie nsogbu ịha nhatanha na azụmaahịa, maka ohere igosipụta ngwaahịa onye ọchụnta ego ha na etiti, ebe enyi na enyi ga-eme nke ọma site na ihe omume na ihe omume.
David Flaherty nke Nestory Park kwuru, “Ihe oru ngo a na -anọchite anya nnukwu mmeri maka obodo, obere azụmaahịa na imepe obodo. Nyere mpaghara agbakwunyere puku kwuru puku ụlọ n'ofe akụ na ụba, na mpaghara kwụ ọtọ, ọrụ a na -egbo mkpa dị mkpa site n'inye uru obodo sara mbara ebe ha na -enwebeghị. Na mmejuputa ya zuru oke, a na-atụ anya na ihe karịrị azụmahịa 30 mpaghara na ndị ọchụnta ego na-ewe ihe karịrị mmadụ 60 ga-arụ ọrụ na saịtị. ”
Nhazi nke mmadụ site na ụlọ ọrụ nwere nkà n'azụ Oracle Park
Maka imewe a, ndị otu Crossing jikọrọ aka Ọtụtụ mmadụ. Ndị na -ahụ ụzọ ọhụụ n'azụ San Francisco's Oracle Park na ámá egwuregwu ndị ọzọ, ebe egwuregwu na ebe mgbakọ gburugburu ụwa, Populous na -amalitekwa ọrụ nwa oge maka Superbowl nke NFL, Olympic na FIFA.
"Anyị chọrọ iji mmụọ pụrụ iche tinye mpaghara San Francisco a na -apụta, na -akpọ ndị mmadụ site na gburugburu ụlọ na gburugburu ụlọ ọrụ ka ha mepụta obodo nke ha site na otu jikọrọ ọnụ na ịkpa oke nke ha na -achọpụta ebe a," Onye isi ndị isi na Populous, Michael Lockwood kwuru. .
Ọrụ a na -ewu ewu na ọrụ a ga -enwe mmetụta karịa San Francisco, na -abụ ihe atụ maka mmegharị ihe na echiche nwa oge nke obodo ka a na -emezigharị ma na -ewu ya, na -egosi otu esi emepụta njikọ dị mkpa na agbataobi gafee mba ahụ.
Onye isi ọhaneze, Riki Nishimura kwuru, "Ịgafe na -agbanwe agbanwe n'ịmepụta uru maka otu ala nke ga -abụrịrị na a ga -agbachitere ya n'oge ikike." “Kama ikwe ka ohere ndị a ghara ịrụ ọrụ nke ọma, anyị na -enyeghachi obodo ahụ saịtị ahụ, na -ekepụta ebe ndị mmadụ ga -enwe obi ụtọ ịnọkọ ọnụ ọzọ. Ọ bụ ezie na akụkọ ihe mere eme saịtị a abụrụla ọnụ ụzọ maka ndị mmadụ ịbata na ịpụ n'obodo, ọ na -aghọ ebe ndị mmadụ nwere ike ịmepụta njem nke ha maka ụbọchị wee soro ezinụlọ ha nwee oge agaghị echefu echefu. ”
Ọ bụ ezie na ECLP na-amalite saịtị ahụ ngwa ngwa ka ndị ọbịa wee nwee ike ịnụ ụtọ mmemme ozugbo, ọ na-arụkọ ọrụ na Populous iji kwalite mmemme na ihe nrụpụta na usoro nke abụọ nke ga-eme ka Crossing bụrụ ihe ọhụrụ, ebe ụwa ga-eme egwuregwu. A na-ele anya àkwà mmiri dị elu nke na-agafe akụkụ nke saịtị ahụ ma na-ekepụta ihe nkiri amphitheater pụrụ iche, dịkwa ka ọkwa nke ga-arụ ọrụ dị ka nnukwu ụlọ ọgbakọ obodo nke oge a na-egosipụta ihe ngosi, ihe omume ọdịnala na nnọkọ obodo. ECLP ejigidere ụlọ ọrụ na -ere ahịa PIVOT nke Bay Area ka ọ gbuo onye nkwado na atụmatụ onye mmekọ iji nyere aka weta ihe ndị a na ihe ndị ọzọ etinyere na ndụ.
Ebe nkwalite a bụ mbọ aka metụtara ọtụtụ ọgbakọ na ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị ọrụ nka, azụmaahịa na ndị mmekọ ga -etinyekwu aka n'ịgbasa na ịkwalite saịtị ahụ.
Ndị otu na ndị nwere mmasị na ohere mmekọ nwere ike ịga www.eastcutcrossing.com ma ọ bụ email [email protected] maka ozi ndị ọzọ.
Banyere ndị mmekọ East Cut Landing
Ndị mmekọ East Cut Landing (ECLP) bụ LLC Uru Ọha na -etolite maka ebumnuche ebumpụta ụwa nke mmepe na ịrụ ọrụ Ịgafe na East Cut, obodo na -aga ebe mbụ Transbay Terminal na San Francisco. N'ịbụ nke nwere ọgbakọ Bay Bay anọ dị iche iche, atọ hiwere isi na San Francisco, ECLP na -enweta ahụmịhe na nka pụrụ iche nke onye ọlụlụ ọ bụla iji nweta otu ebumnuche: na -ebuga uru obodo buru ibu ka mmadụ niile nwee obi ụtọ.
Enweghi uru Mbelata CBD CBD na Soccer Street USA na-enye ike na mmemme pụrụ iche maka ịgbalite, mgbe Ezigbo Ọrụ na Ogige Nestory nyefee mmepe, nkwalite na ahụmịhe ọrụ.